Eo an-tanan'ny orinasam-panjakana fehezin'ny governemanta ny angona iCloud an'ny mpampiasa sinoa ankehitriny. Vaovao IPhone
Volana vitsivitsy lasa izay, nanako vaovao iray izahay, izay nanambarana azy io, ary nanamafy i Apple fa ny angona rehetra momba ny mpampiasa mampiasa iCloud amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny Apple, tsy maintsy nisy tany Sina, noho ny lalàna vaovao nankatoavin'ny governemanta.
Apple dia nanandrana nampitony ny mpanjifany tamin'ny filazany fa na dia eto an-toerana aza ny angon-drakitra, ny lakilen'ny encryption dia tsy hita ao amin'ny firenenaNoho izany, tsy afaka miditra amin'ny antonta-tahiry ireo manampahefana sinoa amin'ny fotoana rehetra. Apple dia nanakarama ny serivisy orinasa eo an-toerana mba hitahiry ny angona, GCBD, satria tsy manana ivon-tahiry ao amin'ny firenena izy.
China Telecom, dia nanambara tamin'ny alàlan'ny WeChat, fa niara-niasa tamin'ny Guuizhou-Cloud Big Data (GCBD) hamindra ireo data rehetra tahiriziny avy amin'ny iCloud mankany amin'ireo mpizara azy ao Tinayi, vaovao iray izay nohamafisin'ny Apple tamin'ny TechCruch. Raha ny fanapahan-kevitra hisafidy ny GCBD, orinasa iray dia manana fifandraisana amin'ny governemanta sinoa, efa niteraka korontana teo amin'ireo mpampiasa, ny fanapahan-kevitr'ity orinasa ity hifindra monina any Mbola ratsy kokoa aza i China Telecom, orinasa tantanan'ny governemanta mivantana.
ICloud data tahiry amin'ny mpizara sinoa ampidiro ny mailaka, ny hafatra an-tsoratra ary ny fanalahidy enkripsi izay miaro azy ireo. Ireo mpampiasa izay tsy te hitahiry ny angon-drakitra ao amin'ny lozisialy GCBD dia nanana ny safidy tokana hanakatonana ny kaonty iCloud azy ireo, izay mahatonga ny tsy fahafaha-mampiasa ny fitaovan'izy ireo na misafidy firenena hafa ankoatr'i Sina ao amin'ny angona kaontiny.
Ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny fiainany manokana dia nampiaka ny feon'ny lanitra ary nitsikera ny fanapahan-kevitr'i Apple hatoky ity orinasa ity, manontany tena raha afaka mitazona sy miaro ny tsiambaratelon'ny mpanjifa amin'ny lalàna sinoa vaovao. Tamin'izany fotoana izany dia nilaza i Apple fa niady izy ireo mba hitazona ny angon-drakitra iCloud tsy ho ao anaty lalàna, saingy araka ny hitantsika, tsy nahomby tamin'ny fanandramana nataon'izy ireo ny orinasa.
Ho fanampin'izany, nanome toky i Apple fa tsy nisy varavarana ambadiky ny namboarina mba hidiran'ny governemanta amin'ny angon-drakitra ary mbola eo ambany fifehezan'i Apple ny lakilen'ny encryption fa tsy ny governemanta sinoa. Ny mazava dia izany Apple dia orinasa ary i Shina dia iray amin'ireo firenena manome vola be indrindra amin'ny orinasa, koa raha nasain'ny governemanta hitsambikina tady izy, dia hataon'i Apple tsy am-pisalasalana izany, avelany ankilabao ny fiainana manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Eo am-pelatanan'ny orinasa iray fehezin'ny governemanta ny angona iCloud an'ny mpampiasa sinoa ankehitriny
P dia hoy izy:
Amin'ity fitsipiky ny telo ity, toa anao ny orinasa iray manome vola anao hiteny ratsy an'i Apple ary raha miteny aminao izy ireo mba hitsambikina tady amin'ny malemy dia tsara ihany koa ny ataonao?
Mamaly an'i P